“မျိုးနဲ့ရိုးနဲ့ သားစဉ်မြေးဆက် စစ်ကျွန်မဖြစ်ကြဖို့လိုတယ်” | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Home“မျိုးနဲ့ရိုးနဲ့ သားစဉ်မြေးဆက် စစ်ကျွန်မဖြစ်ကြဖို့လိုတယ်”
“မျိုးနဲ့ရိုးနဲ့ သားစဉ်မြေးဆက် စစ်ကျွန်မဖြစ်ကြဖို့လိုတယ်”
Htun Htun Gin Gyi
တောင်ကိုးရီးယားမှာ သူ့တပည့်ကိုယ်ရံတော်ကလုပ်ကြံလို့ သေသွားတဲ့ တောင်ကိုးရီးယားစစ်အာဏာရှင် ပတ်ချုံဟီး….ရဲ့သမီးပါ။
သူ့အဖေက ဗမာစစ်အာဏာရှင် ဗိုလ်နေဝင်းနဲ့ခေတ်ပြိုင်တွေ…..
တောင်ကိုးရီးယားလစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီမှာ သူ့သမီးအသက်(၅၀) ကျော် အရွယ်ရောက်တော့ မဲနိုင်ပြီး သမတပြန်ဖြစ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။
ဗီဇလေးပါလာတော့ သူ့အဖေစစ်အာဏာရှင်လိုတော့ ပြောင် မတရားမလုပ်ဘူး ခိုးချောင်ခိုးဝှက် ပါးပါးလေးအကျင့်ပျက်ခြစားလိုက်တာ…. ပေါ်သွားပြီး …. လူထုက အရေးယူဖြုတ်ချဖို…့အတင်းဖိအားတွေပေးလို့…… တောင်ကိုးရီးယားတရားရုံးချု ပ်က… နောက်ဆုံး…နေလိုမရတော့ပဲ …..သမတကိုတရားစွဲတယ်… ပြုတ်တယ်… နေအိမ်အကျယ်ချု ပ်ကနေ အခု….ထောင်ထဲရောက်သွားပြီ။
ဒါကြောင့်ပြောနေတာပါ လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲခေတ်တွေမှာ အာဏာရှင်မျိုးဆက်တွေ… နိုင်ငံရေးမှာ… ငွေကြေးအားနဲ့……. ဖိန့်လုံး ဖားလုံး လေပြေထိုး… စသည်ဖြင့် လူထုကိုချော့မြူ ပြီး ….အာဏာတကျော့ပြန်ကျိုးစားလာတတ်တယ်……..
(ဖိလစ်ပိုင်မှာ မားကိုစ်သားသမီးတွေ ခေါင်းပြန်ထောင်နေပြီ)
အခု…နေဝင်းမြေးတို့ ….သန်းရွှေမြေးတို့…ဆိုတာ သူတို့အဖိုးတွေက တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာခိုးဝှက်မတရားလုပ်ပြီး ထားခဲ့တဲ့ငွေတွေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုတွေကို ထူထောင်လုပ်ကိုင်နေတာနော်
အခုYBS ဘစ်ကားစနစ်ကြီးမှာ သူတို့က အဓိကရင်းနှီးသူတွေအဖြစ်ပါနေတယ်။
နောက်ကြ…. ရွေးကောက်ပွဲတွေအထိရောက်လာပြီး အာဏာတံခါးဝရောက်လာနိုင်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိ န် အခုတောင်ကိုးရီးယားအုပ်ချု ပ်ရေးလောက်လုပ်ရဲကိုင်ရဲတဲ့ ဥပဒေတွေ အခင်းအကျင်းတွေလောက်တောင် ဗမာပြည်ရှိပါ့မလား…..
တောင်ကိုးရီးယားအခုအုပ်ချု ပ်ရေးအခြေအနေလောက်… လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီဖြစ်ပါ့မလား….. မဖြစ်သေးရင်တော့…. ကျိ န်းသေတယ် စစ်ခရိုနီမျိုးဆက် …ထပ်ခေါင်းထောင်လာနိုင်တယ်။
ကြိုသာပြင်ထားကြ… ငွေမရှိရင် ရွေးကောက်ပွဲမဝင်နိုင်အောင် အခုရှိနေတဲ့ ၂၀၀၈ ဥပဒေကြီးနဲ့လုပ်ထားပြီးသား…….
စစ်အုပ်စုလက်ထဲမှာ တပ်ရော လက်နက်ရော လက်ကိုင်တုတ်ပါတီရောရှိနေတယ် ဒီတော့ လက်ရှိရေခံမြေခံအနေအထားကိုတွက်ရင် စစ်အုပ်စုနဲ့ မျိုးနွယ်တွေဘက်က ဗမာပြည်မှာ ရေရှည်အတွက် အများကြီးအားသာနေတဲ့အနေအထားပါ
အာဏာရော၊ငွေကြေးရော၊အင်စတီကျူးရှင်းတွေအားရော အဖက်ဖက်ကပြင်ထားပြီးသားဖြစ်နေတယ်
ဒီတော့…. တို့အတိုက်အခံတွေဆိုသူတွေက ၂၀၀၈ ခြေဥကိုမဖျက်သိမ်းနိုင်ရင် ရေရှည်အနေအထားရခံသွားရဖို့ရှိနေတယ် …..
ဗမာပြည်သားတွေမှာ သစ္စာဖေါက်ကလည်းသိတ်များတယ်…..
သူဌေးကိုဘုရားထူးချင်တဲ့ပဒေသရာဇ်စိတ်ဓါတ်ရှိသူသိတ်များတယ်….
စစ်ဗိုလ်မယားလုပ်ချင်သူတွေလည်းပေါနေတယ်….
ကြာရင်မျိုးနွယ်စုအခုထက်ပိုကြီးသွားပါလိမ့်မယ်….
( စစ်အာဏာရှင်စံနစ် ဗမာပြည်မှာအချိန်အကြာကြီးတည်ရှိနေနိုင်တာ ဗမာပြည်သားတွေရဲ့အားနည်းချက်တွေပါတယ်… ခြုံပြောတာပါ အဖိနှိပ်ခံလူထုစော်ကားတာမဟုတ်ရပါဘူး)
အရင်လုပ်ရမှာကိုမလုပ်ပဲ စစ်အုပ်စုနှပ်ကြောင်းနောက်လိုက်နေကြတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားမျိုးတွေသတိရှိကြပါ…..
ရန်သူ့ထောင်ချောက်ထဲကျသွားရင် ပြန်တက်ရတာခက်တယ်။
တော်ကြာရန်သူ့မချရပဲ ကိုယ့်အချင်းချင်းပြန်လည်ပင်းညှစ်နေရတာနဲ့… နိုင်ငံရေးအရ ပုဆိုးကွင်းလုံးကျွတ်ကုန်ရင် မြင်မကောင်းဘူး……
တခုအားသာတာက…. ဗမာပြည်မှာက သူချကိုယ်ချလုပ်နိုင်တဲ့…. လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတွေရှိနေတာက တောင်ကိုးရီးယားနဲ့ မတူကွဲပြားတဲ့အခြေ
ဒီအခြေအနေကို …မှန်မှန်ကန်ကန်တပ်ပေါင်းစုအနေအထားနဲ့ ……စစ်အုပ်စုကို နိုင်ငံရေး၊စစ်ရေးအရ သေနင်္ဂဗျူ ဟာမှန်မှန်နဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်ရင်မဆိုင်ကြပဲ
စစ်အုပ်စုလမ်းကြောင်းချရေးဆွဲထားတဲ့.. NCA လောက်နဲ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းမယ်လို့ထင်နေကြရင်…….ကိုယ့်လည်ပင်းကိုယ်ကြိုးကွင်းစွတ်လိုက်တာပဲဆိုတာ တော့ သိကြဖို့ကောင်းတယ်……
တော်လှန်ရေးဆိုတာ တပ်ပျက်သွားရင်ပြန်စုဖို့မလွယ်ဘူး…..
ဘက်ပေါင်းစုံက အခြေအနေရင့်မှည့်မှုတွေကို စောင့်နေရပါလိမ့်မယ်။
ကြားထဲမှာ ခရိုနီစစ်အာဏာရှင်မျိုးဆက်က ကပြားလေးလုပ်ပြီး….
မူတွေ၊ပေါ်လစီလေးတွေ လစ်ဘရယ်စံနစ်နဲ့ အံဝင်အောင်၊ကြည့်ကောင်းအောင်ချပြီး သားစဉ်မြေးဆက် အာဏာဆက်ယူသွားနေမှဖြင့် …………
သူပုန်တွေရော၊မပုန်သူတွေရော၊ဆင်းရဲသားပြည်သူတွေရော၊တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေရော စစ်မျိုးဆက်အောက်မှာ ကျွန်ဆက်ဖြစ်နေမဲ့ကိန်းဆိုက်မှာပဲ…..
ကျောသပ်သွေးစုတ်ခံရမှာပေါ့…. အဲ့ဒါမှခက်ကုန်မယ်။
ကျု ပ်ဗမာပြည်ချစ်လွန်းလို့ပြောနေတာပါ………….
ကျု ပ်သားသမီးတွေက နိုင်ငံခြားမှာ….
ကျု ပ်မြေးက ကျု ပ်ကို How are you doing Grandpa? လောက်ပဲ…..
ကျု ပ်မြေးတွေစစ်ကျွန်မဖြစ်ဘူး……
ကျု ပ်ကလေးတွေ စစ်ကျွန်မဖြစ်ဘူး ……..
ဒါပေမဲ့ ဗမာပြည်မှာ…..မမွေးသေးတဲ့ ကျု ပ်နိုင်ငံသားတွေ မျိုးဆက်အလိုက်.. စစ်ကျွန်ဆက်ဖြစ်မှာတော့….
ကျု ပ်အသဲနာမိပါတယ်…..
လုပ်ကြကိုင်ကြပါ… ပြတ်ပြတ်သားသား လုပ်စရာအရင်လုပ်ကြစမ်းပါ…..
ရန်သူကိုအသက်ရှုခွင့်ပေးနေတဲ့ အချောင်အတွေးအခေါ်တွေ .ဖယ်ထုတ်စဉ်းစားကြစမ်းပါ…
ပြည်တွင်းကရဲဘော်တွေ သတိချပ်ကြစမ်းပါဗျာ…….
ကျုပ်ပညာရှင်မဟုတ်ပါဘူး …..
စစ်အာဏာရှင်စံနစ်တော့ ဖျက်သိမ်းမှရမယ်……
ဒီတော့ ၂၀၀၈ခြေဥဖျက်သိမ်းရေးဆိုတာ
စစ်ကျွန်မဖြစ်အောင်လုပ်တာ…လို့ ရိုးရိုးဘဝပေးအရသိနေ၊မြင်နေလို့ပါဗျာ…..။
← မြန်မာမွတ်စလင်အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ဖြစ်နေတာက ကိုယ်လည်းရှေ့ထွက်ခေါင်းမဆောင်ဘူး နေရာတခုယူထားပြီး ခေါင်းရှောင်နေတယ် ရှေ့ကလုပ်မဲ့သူပေါ်လာရင်လည်း မသိုင်းကြ မဝိုင်းကြဘူး ဝိုင်းထိုးချဖို့ ဝိုင်းဖြု တ်ချဖို့ စဉ်းစားနေကြတယ်
Photos of Buddhist terrorist groups who proudly show their lethal weapons with their most sacred religious signs →